IIS, IMS र Manifold GIS को बारेमा प्रश्नहरू - Geofumadas
IIS, IMS र Manifold GIS को बारेमा प्रश्नहरू
नोभेम्बर, 2008 जियोस्पाटियल - जीआईएस, मितोल्ड GIS
मेरो अन्तिम बैठकबाट प्रश्नहरू मनिफल्ड जीआईएसको साथ प्रकाशन सेवाको निर्माणमा नगरपालिकाहरूसँग नारियल तोड्ने टान्नीशियनसँग प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मैले अघि उल्लेख गरेको मैन्युअल पुस्तिका.
यी सेवाहरू सिर्जना गर्ने अभिप्राय भनेको क्याडस्ट्रेटर विभागले डाटा प्रदान गर्न सक्दछ, फाईलहरू साझेदारी गर्ने वा अपडेट गर्ने चिन्ता बिना। उदाहरणका लागि नगरपालिका वातावरणीय इकाई, शहरी नियन्त्रण वा उही नगरपालिकाको साथ जो गुगल नक्सामा वा आर्किज जस्तो जीआईएस प्रोग्राम मार्फत गरिएको ब्राउजर मार्फत पहुँच गर्न सक्दछ।
1 किन IIS?
IIS प्रकाशन सेवा हो जुन विन्डोजले पहिले नै ल्याउँदछ, ASP मार्फत, यस मार्गको माध्यमबाट मनिफोल्डमा प्रकाशन मात्र "फाईल, html मा निर्यात" चाहिन्छ। मनिफोल्डको साथ सम्भव छैन एक प्रकाशन सेवा सिर्जना गर्न Apache सर्भर प्रयोग गरेर मैले चिनेको छु ... वा केवल मानिस द्वारा मात्र होईन।
2 विन्डोको कुन संस्करण?
Windows XP Professional IIS बाट एकीकृत हुन्छ ... त्यो j * dida जो गृह संस्करण छ किनकि किनकी त्यहाँ वेबमा भन्न सकिन्छ कि तपाईले प्याच गर्न सक्नु भएको छ, मैले प्रयास गरेन
3 आईआईएस कसरी सक्रिय गर्ने?
सुरु गर्नुहोस्, नियन्त्रण प्यानेल गर्नुहोस्, प्रोग्राम थप्नुहोस् वा हटाउनुहोस्, विन्डोज कम्पोनेन्टहरू थप्नुहोस्। IIS छनौट गरियो र "अर्को" बटन लागू गरियो, यस्तो सम्भावना छ कि यसले विन्डोज सीडी सोध्छ, यदि यो पूर्व स्थापित छ ... अर्कोf* ck।
4 सेवाहरू कसरी सुरू गर्ने?
तर मानिस, त्यो विन्डोज पढ्ने मा आउछ !!!
सुरु गर्नुहोस्, नियन्त्रण प्यानेल, प्रशासकीय उपकरणहरू, ईन्टरनेट सूचना सेवाहरू। सेवा सुरू गर्नको लागि प्ले आइकन छनौट गर्नुहोस्।
5 स्थानीयहोस्स्टमा कसरी पहुँच सिर्जना गर्ने?
अघिल्लो प्रश्नको एउटै प्यानलमा रहेको, मेजबानको रूपमा काम गर्ने मेटिने छान्नुहोस्, "वेबसाइटहरू" फोल्डरको गुणहरू चयन गरिएका छन् र पहुँच विशेषताहरूमा प्रयोगकर्ता "फारमको IUSR_NAME" फारममा समावेश गरिएको छ। जुन सेवा गरिएको नक्सा अज्ञात प्रयोगकर्ता मार्फत साझेदारी गर्न सकिन्छ।
निस्सन्देह, त्यहाँ त्यहाँ अन्य जटिल जटिल तरिकाहरू छन्।
6 प्रकाशन सेवा कसरी बनाउने?
J * der! तपाईले मेरो ब्लग पढ्नुहुन्न जस्तो,5कम अंकहरू, यहाँ पढ्नुहोस्, यहाँ, यहाँ y यहाँ र त्यसपछि उहाँ मलाई सोध्नु हुन्छ।
7 इन्टरनेटमा नक्शाहरू कसरी साझेदारी गर्ने?
सरल, यदि तपाईं समान नेटवर्क भित्र हुनुहुन्छ भने आईपी लेख्नुहोस्। आईपी ​​पत्ता लगाउनका लागि, मेशिनमा त्यसो गर्नुहोस् जुन डेटा "स्टार्ट, रन, सेन्टिमेन्ट, इन्टर गर्नुहोस्" र त्यहाँ आईपन्फिग लेख्नुहोस्।
त्यहाँ एउटा 192.168.0.109 जस्तै हुनुपर्छ जुन मेशिनको आईपीमा देखा पर्दछ ताकि सञ्जालको प्रयोगकर्ताले आईपी ब्राउजर चयन गर्नुहोस् र नक्शा फोल्डरमा तपाइँले प्रकाशित प्रकाशित हेर्न सक्नुहुनेछ।
192.168.0.109 / नक्साहरू /
यदि फरक रूपमा विकास गर्न चाहानुहुन्छ भने फरक नक्साहरू साझेदारी गर्न चाहानुहुन्छ भने यो फरक फोल्डरमा प्रकाशन गरिएको छ भने यदि तपाई पहिले नै एक मेनु सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं विभिन्न नक्सामा लिङ्कहरूसँग आधारभूत पृष्ठ विकास गर्न सक्नुहुनेछ ... यदि होइन, साधारण सर्टकर्टहरू। यदि तपाइँ इन्टरनेट मार्फत यो गर्न चाहानुहुन्छ ... यो अर्को पोष्टको कारण हो किनभने यो सार्वजनिक आईपी वा अन्य जग्गाको आवश्यकता पर्दछ।
8 AutoCAD वा ArcGIS को साथ नक्शा कसरी साझा गर्ने?
यदि, प्रकाशन गर्दा, wms र wfs विकल्पहरू सक्रिय हुन्छन्, ArcGIS, GvSIG, Microstation V8i, AutoCAD नक्सा वा OGC सेवाहरूको समर्थन गर्ने कुनैपनि अनुप्रयोगले यस यूआरएलको माध्यमबाट यो डेटा पहुँच गर्न सक्छ:
यस अवस्थामा म तिनीहरूलाई छविको रूपमा देख्नेछु
यस अवस्थामा तपाईँले तहहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ
ब्लग gvSIG ओएस मितोल्ड GIS
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो आईएमएमलाई गुणा गर्नुहोस्, केहि गर्न गरिरहेको छ
अर्को पोस्ट कसले नोकिया जित्न चाहँदैनन्अर्को »
२ जवाफ "IIS को बारेमा प्रश्न, IMS र Manifold GIS"
तर यो पहिलो पटक काम गरेको छ वा कहिल्यै?
नमस्ते मित्र, एउटा प्रश्न ...। जब म विन्डोज भिस्टामा IIS7स्थापना गर्दछु, मैले IE7 मा जानु पर्छ र लोकलहोस्ट टाइप गर्नुपर्नेछ। तर पृष्ठ फेला नपरेसम्म, अब यो खाली देखिन्छ र गृह पृष्ठ देखा पर्दैन, यो बैजनी देखिन्छ, किन? के हुन्छ? र हुनसक्छ यो मेरो प्रशासक खाता लिन्छ यदि यो एक प्रशासक थिएन ...
मलाई मदत गर्नुहोस्